musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Mamwe ndege matanhatu epasi rese anoshandisa IATA Travel Pass
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Etihad Airways, Jazeera Airways, Jetstar, Qantas, Qatar Airways uye Royal Jordanian, ichaita IATA Travel Pass muchikamu chakaburitswa pamatanho enhandare dzendege.
Dzimwe ndege dziri kujoina Emirates Airline seIATA Travel Pass ekushandisa mapiyona.
Chiziviso ichi, chakaitwa padivi peMusangano wegumi nematanhatu weIATA wegore negore uri kuitirwa muBoston, unotevera mwedzi gumi nerimwe yekuyedzwa zvakanyanya nendege dze77.
IATA Travel Pass ndeye mobile app iyo inogona kugamuchira uye kuongorora huwandu hweECVID-19 bvunzo mhedzisiro uye edhijitari majekiseni ezvitupa.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakazivisa kuti Etihad Airways, Jazeera Airways, Jetstar, Qantas, Qatar Airways neRoyal Jordanian, ichaita IATA Travel Pass muchikamu chakaburitswa pamatanho enhandare dzendege. Idzi nendege shanu dzinobatana neEmirates Airline seIATA Travel Pass ekushandisa mapiyona.
Chiziviso ichi, chakaitwa padivi pechi77 Iată Musangano Mukuru wepagore uri kuitirwa muBoston, unotevera mwedzi gumi nerimwe yekuyedzwa zvakanyanya nendege makumi manomwe nenomwe.
“Mushure memwedzi yekuyedzwa, IATA Kufamba Pass yava kupinda muchikamu chekushanda. Iyo purogiramu yakazviratidza pachayo kuva chishandiso chinobudirira chekugadzirisa kusanzwisisika kwakaomarara kwemazita ehutano hwekufamba anodiwa nehurumende. Uye vhoti huru yekuvimba kuti mamwe emhando dzendege dzinonyatso kuzivikanwa dzichave dzichiita kuti dziwanikwe kune vatengi vavo mumwedzi iri kuuya, ”akadaro Willie Walsh, Director General weIATA.
Iyo app inopa yakachengeteka uye yakachengeteka nzira yekuti vafambi vatarise zvinodiwa parwendo rwavo, vagamuchire mhedzisiro yekubvunzurudza uye vatarise zvitupa zvavo zvekudzivirira, vaone kuti izvi zvinosangana nekwekuenda uye kwekufambisa zvinodiwa uye vanogovana izvi nesimba nevatano vezvehutano uye nendege vasati vaenda. Izvi zvinodzivirira kumiswa mumutsetse uye kuzara kwekutarisa magwaro - kubatsira vafambi, ndege, nhandare pamwe nehurumende.
IATA Kufamba Pass iyi nharembozha inogona kugamuchira uye kusimbisa huwandu hweECVID-19 mhedzisiro bvunzo uye zvitupa zvejekiseni Parizvino zvitupa zvekudzivirira kubva kunyika makumi mashanu nenomwe (zvinomiririra sosi ye52% yenyika dzekufamba nendege) zvinogona kutarisirwa uchishandisa Anwendung. Izvi zvichawedzera kusvika kunyika makumi manomwe nenomwe, inomiririra 56% yemafambiro epasi rose, kupera kwaNovember.
IATA Travel Pass inotarisirwa kutora chinzvimbo chakakosha mukugadziriswa kweindasitiri yendege kubva mukukanganisa kwe COVID-19. Mhedzisiro yedhijitari yekugadzirisa mapepa eCOVID-19 mafambiro ehutano hwekufamba anotsigira kudzoka kwekufamba kana miganhu yakavhurwa. Iine hurumende zhinji dzinovimba nendege dzeCOVID-19 gwaro rinotarisa izvi zvichave zvakakosha mukudzivirira mitsara uye kuzara pakutarisa-mukati sekufamba kwenzira.